संजोग कोइराला जब स्वस्तिमा र निश्चलको वेडरुममा सिधै गए ? घटना सुनाएर गरे रमाइलो हेर्नुस् (भिडियो सहित) - Mountain Media
संजोग कोइराला जब स्वस्तिमा र निश्चलको वेडरुममा सिधै गए ? घटना सुनाएर गरे रमाइलो हेर्नुस् (भिडियो सहित)
काठमाडौ । नेपाली कलाकारहरु मध्य केहीको निकै राम्रो साथीको सम्बन्ध छ । ति मध्य स्वस्तिमा खड्का र संजोग कोइराला पनि एक हुन् । उनीहरुको बिचमा निकै राम्रो मित्रता रहेको कुरा एक टेलिभिजन अन्तरवार्ताका क्रममा स्वस्तिमाले बताएकी छन् । उनलाई संजोगका कारण कहिल्यै अप्ठेरोमा पर्छु जस्तो लाग्दैन । उनलाई संजोगले निकै सहयोग गर्ने गरेको उनको भनाई छ
Previous: नेपाली सेनाका सिपाहीले…
Next: ज्वाला सङ्ग्रौलालाई थुन्न आज अदालतबाट म्याद थपिँदै,अर्को उजुरी पनि आज नै